Kuenzanisa kwakazara pakati peIntel MacBook Air uye MacBook Air neM1 | Ndinobva mac
Kuenzanisa kwakazara pakati peIntel MacBook Air uye MacBook Air neM1
Tatova nesu MacBook Air ine M1. Chikara chakareruka. Kufara chaiko uko zvakare zvakare kunoisa iyi komputa munzvimbo yainofanirwa. Zvekare zvine musoro kukwanisa kutenga chishamiso ichi. Asi yeuka kuti iyo MacBook Air ine Intel processor ichiri kutengeswa. Tinokuunzira kuenzanisa kwakazara pakati pezviviri.
Tinotanga ne pfupiso tafura yezvakataurwa yeimwe yetemu mbiri uyezve isu tichaongorora zvinhu zvakakosha zvakanyanya kusimbisa misiyano uye fanano pakati pawo.
1 Rondedzero yezvinhu zviviri zviteshi
2 MacBook Air ine M1 VS kune Intel vhezheni kunze
3 Tendeuka ikozvino kuti uongorore zvikwangwani
4 Chinhu chinonakidza chinouya ikozvino: MacBook Air ine M1, kushamisika kuzadzikiswa
5 Vachaita sei vaviri pamachati?
6 MacBook Air ine M1 keyboard inyowani
Rondedzero yezvinhu zviviri zviteshi
M1 MacBook Mhepo
Intel MacBook Mhepo (2020)
Kutanga mutengo kubva € 1129 kusvika € 1.399 kubva € 1129
Peso 1,29 makirogiramu 1,29 makirogiramu
Processor Apple M1 sere-musimboti 10th chizvarwa 1.1GHz Intel Core i3
Graphics 7-musimboti Apple GPU
8-musimboti Apple GPU Intel Iris Plus Graphics
gondohwe 8GB 16GB 8GB, 16GB
Nets Wi-Fi 6
MAKARALI USB 5.0 Wi-Fi 802.11ac
Self Storage 256GB, 512GB, 1TB, 2TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
tarisisa 13,3-inch 2560 × 1600 LCD ine IPS uye Chokwadi Tone 13,3-inch 2560 × 1600 LCD ine IPS uye Chokwadi Tone
Zviteshi Mavara maviri e USB
3,5mm musoro wefoni jack Mbiri mbiri dzeThunderbolt 3
3,5mm musoro wefoni jack
Biometrics Bata ID Bata ID
Bata Bhari Aihwa Aihwa
MacBook Air ine M1 VS kune Intel vhezheni kunze
Iko kusaina kutarisa kweMacBook Air ndiko kutaridzika kwayo, nemagadzirirwo ebhuku remabhuku achiichengeta yakatetepa zvakanyanya maererano nehukuru. Ndicho chinoita kuti komputa iyi inakidze. Pakunaka kwazvo, inowana zviyero zvinotyisa zve laptop. Iyo inorarama kusvika kune ino notibhuku rating. Chiedza asi chinotyisa.
Sezvatinoona mune tafura zvinotsanangurwa, hapana misiyano yakakura pakati pemhando mbiri idzi. Chinhu chimwe chete ichi chinoitika nekurema, zvakafanana. Naizvozvo runyerekupe rwakaratidza kuti kwaizove pasina shanduko kunze kwenyika dzinozadzikiswa. Asi chakanaka chiri mukati. Hapana mubvunzo.
Tendeuka ikozvino kuti uongorore zvikwangwani
Iko kuratidzwa kweIntel MacBook Air ndiyo-yakareba-yakamira 13,3-inch IPS LED inoratidzira, ine resolution yemuno ye2.560 ne1.600. Izvi zvinokupa iwe pixel density ye 227 pixels pa inch. Pasina kushamisika, iyo M1 modhi ine yakafanana saizi saizi, resolution, uye pixel density. Iko hakuna shanduko maererano ne kupenya chero, iine Intel uye M1 akasiyana anokwanisa kugadzira kusvika mazana mana nits..
MaBhaibheri ese ari maviri anosanganisira rutsigiro rweWide Ruvara (P3) uye Chokwadi Toni, Apple's system yekugadzirisa otomatiki tembiricha tembiricha kuti ifanane neshanduko mumwenje wekuvhenekera, kudzivirira iyo skrini kubva pakuonekwa ichichinjika kune mushandisi ichienzaniswa nenzvimbo dzayo.
Chinhu chinonakidza chinouya ikozvino: MacBook Air ine M1, kushamisika kuzadzikiswa
Apple inopa sarudzo ye vanosvika vatatu processor ("Ice Lake") for the Intel-yakavakirwa MacBook Mhepo:
Intel Core i3. A 1,1 GHz dual-core processor neTurbo Boost inosvika ku3,2 GHz uye 4 MB yeL3 cache.
Core i5. China 1,1 Ghz cores ine 3,5 GHz Turbo Boost uye 6 MB L3 cache.
Iyo yepamusoro modhi. Core i7. Inofambiswa ne1,2Ghz quad-core chip ine 3,8GHz Turbo Boost uye 8MB L3 cache.
Iyo M1 chip mune iyo nyowani MacBook Air anoshandisa chirongwa che5 nanometer pane iyo 10 nanometer vhezheni inoshandiswa neIntel. Iyo inoshandisa masere masere, anosanganisira mana akakwirira-anokwanisa cores uye ina epamusoro-mashandiro cores, ayo anogona kushandiswa mumisanganiswa yakasiyana siyana kupa zvakakwana kuita kwemushandisi uchideredza kushandiswa kwebhatiri. Iwo mana emhando yepamusoro-anoshanda cores anonzi anomhanyisa kunge maviri-epakati chip yega, neM1 inotokwanisa kushandisa ese masere macores panguva imwechete kana zvichidikanwa.
Iko kushandiswa kwekubatana ndangariro yekuvaka ndeyekubatsira kuwedzera kuvandudza mashandiro, kunyangwe paine zvakare pane-bhodhi neural injini yekufunga. 16-core injini inopa anosvika mabhiriyoni gumi nemaviri mashandiro sekondi, izvo zvinobatsira nemabasa anotora mukana wekudzidza kwemuchina.
Vachaita sei vaviri pamachati?
PaIntel modhi, iyo MacBook Air inoshandisa Intel Iris Plus. Iyo MacBook Air ine M1 inoshandisa yayo GPU dhizaini sechikamu cheSoC yayo, Iyo yakavakirwa muchikamu pane iwo aunogadzira uye aunoshandisa kupa giraidhi pane iyo iPhone nePad mitsara. Kubva pane zvakatsanangurwa naApple, iyo GPU ndiyo "processor yemhando yepamusoro" iyo kambani yakambogadzira, uye inonzi inopa kaviri kuita kwezvizvarwa zvakapfuura.
Pepa, Apple yakatsanangura iyo M1 inoshandisa inosvika ku8 GPU cores, saka yaizopa mifananidzo kusvika ka5 nekukurumidza kupfuura iyo yapfuura chizvarwa cheiyo 8-core vhezheni. Zvakare neiyo M1, zvinopfuura mukana wekubvuma resolution inosvika ku6K pa60Hz, uye zvinokwanisika kubata kusvika kumaviri skrini.
Kushaikwa kweuchapupu chaihwo kunotitendera chete, panguva ino ita zviyero uchifunga nezve izvo zvirevo zvinotaurwa muhurukuro.
MacBook Air ine M1 keyboard inyowani
Mamwe makiyi mumutsara wekutanga akagadziriswa nemabasa matsva akananga. Pane matatu makiyi mumutsara wekutanga akachinja mashandiro awo kana iwe ukaadzvanya iwo. Iye zvino iyo nyowani MacBook Air ine M1 maficha makiyi matsva eSotlight, kudaira y usavhiringidza.
Kana zviri zvimwe zvinotsanangurwa, seMemory, kubatanidza, madoko uye nezvimwe, tinofanirwa kutaura kuti kune technical tie, sezvo iwo maratidziro mune iyi nyaya akafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Air » Kuenzanisa kwakazara pakati peIntel MacBook Air uye MacBook Air neM1
Macs ane M1s haatsigire eGPU
Apple Silicon's MacBook Air inosanganisa khibhodi nyowani